बीबीसी वल्र्ड सर्भिसले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सोध्यो सगरमाथामा ट्राफिक जाममा आरोही किन मरे ?	Postpati – News For All
बीबीसी वल्र्ड सर्भिसले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सोध्यो सगरमाथामा ट्राफिक जाममा आरोही किन मरे ?
पोष्टपाटी २०७६ जेष्ठ ३०,बिहीबार प्रकाशित पढ्न लाग्ने समय : ४ मिनेट
जेठ २९, काठमाडौं । बीबीसी वल्र्ड सर्भिसले प्रधानमन्त्री ओलीलाई र्‍याखर्‍याखी पार्दै अन्तर्वार्ता लिएको छ । नेपाल टेलिभिजनमा लामो अन्तरवार्ता दिने बानी परेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई अन्तरवार्ताकारले धेरै बोल्नै दिएनन् ।
त्यसपछि नेपालमा विमानस्थल बनाउने नाममा वातावरणीय प्रभावलाई ख्याल नगरी वन फँडानी भइरहेको आरोप बीबीसी पत्रकारले लगाए ।
अन्तरवार्तामा प्रधानमन्त्री ओली राजनीतिक विषयमा प्रवेश गर्न खोज्दाखोज्दै अन्तरवार्ताकारले प्रश्नलाई बीआरआईतिर मोडे ।
प्रधानमन्त्री– यदि हामीले २५ लाख रूख काट्यौँ भने हामीले ५० लाख रूख रोप्न सक्छौँ । हामीले नदीको टर्निङ पनि गरिरहेका छौँ यसरी प्राप्त जग्गामा पनि हामी रूख रोप्छौँ । हाम्रो देशको ४५ प्रतिशत भूभागमा वन छ । हाम्रो देशको १७ प्रतिशत भूभाग हिउँले ढाकिन्छ र १३ प्रतिशतमा त सधैँ हिउँ हुन्छ । यसले रि–कुलिङ र रि–चार्जमा ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको छ । हाम्रो देशको ४५ प्रतिशत भूभागमा वन छ । हामीले ६२ प्रतिशत जग्गा वातावरणसित सम्बन्धित मुद्दाहरूका लागि छुट्याएका छौँ । यसै वर्ष हामीले १ करोडभन्दा बढी रूख रोप्ने अभियान शुरु गर्दैछौँ ।